SMIC 2021: kororka 0,99%
Mushaharka ugu yar ee saacadda 2021 waxaa loo kordhiyay 10,25 euro oo guud ah, yacni 1554,58 yuuroo guud bishiiba iyadoo lagu saleynayo muddada sharciga ah ee 35 saacadood asbuucii.
Mushaharka tababbarka iyo shaqaalaha qandaraasyada tababarka xirfadeed waa la kordhiyay ka dib markii la kordhiyay mushaharka ugu yar Janaayo 1, 2021, mushaarkooda ugu yar ayaa la dejiyaa marka loo eego boqolkiiba mushaharka ugu yar.
⇒ 2021 mushaharka ugu yar
Dammaanad ugu yaraan 2021
Sannadka 2021, xaddiga ugu yar ee la hubo ayaa weli lagu hagaajiyaa 3,65 euro ee magaalada weyn ee Faransiiska.
⇒ Dammaanad ugu yaraan 2021
Heerka 2021 AGS weli isma beddelin 2021.
⇒ AGS 2021: sicirka wali lama badalin
Ka faa'iideyso nooca 2021: 4,95 euro cunto kasta
Gargaarka cuntada iyo guryaha ee 2021 noocyadu waa xubno ka mid ah gunnada oo ku xiran tabarucaadka bulshada. Laga bilaabo Janaayo 1, 2021, gargaarka cuntada noocyadiisa kala duwan waxaa laga dhigay 4,95 euro halkii raashin.
⇒ Faa'iidooyinka nooca 2021
Kharashaadka xirfadeed 2021: 6,70 euro ee loogu talagalay kaalmada cuntada ee goobta shaqada
Marka kharashyada xirfadeed dib loo bixiyo iyadoo la adeegsanayo habka magdhawga qiimaha go'an, qadarka waxaa dejiya URSSAF. Kharashaadka xirfadeed
Mushaharka: maxaa isbeddelaya Janaayo 1, 2021 July 10th, 2021Tranquillus
horeU wareejinta xuquuqda shaqsi ee tababarka koontada tababarka shaqsiga: ugu dambayn Juun 30, 2021
socdaCalc Bilaash ah: Shaqada IF